The World of Moe Thanzin: မိုင်တိုင်၂၉
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 7:22 AM
မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ချစ်ညီမလေးမြူးရေ ။
မြူးမြူးရဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေ ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်ပါစေ လို့ အမကလဲ ဆုတောင်းပေးနေပါမယ်နော်။
၀ိတ်ကချဦးမလို့လား ..ခုအတိုင်းလဲတော်တော်လှနေပါပြီနော် ။ အယင်မိုးသံစဉ်လေးနဲ့ ရေကစားနေတုံးကပုံဆိုအတော်ဝနေတာ ။ ဟိုနေ့ က ညီမလှလှလေးကို အပြင်မှာ ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်၇တော့ အံ့သြောဝမ်းသာပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ :D <3<3<3
မမ ရေ လုပ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်ခွင့်ရပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့တွေကို ချစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တူတူဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ သားလေး အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာတွေကိုလဲ ဘေးကနေ အထင်းသားမြင်သာပါတယ်။ မမ မျှော်လင့်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေနော်။
Happy Birthday ပါမမြူး
၂၉ မှသည်...နောက်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာလိုရာတွေပြည့်ပါစေ..။ ဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါစေ..။
ပျော်စရာ မွေးနေ့နော် ညီမ မြူး...း))
Happy Birthday to you, sis Myue!! May you be always happy with your beloved family. I hope your one wish will be fulfilled soon, to stay together with Thar Thar....